Home Wararka Dibada Boobka aan laga war hayn ee Midowga Yurub uu ku hayo SOOMAALIYA...
Boobka aan laga war hayn ee Midowga Yurub uu ku hayo SOOMAALIYA (Warbixin)
Soomaaliya oo leh xeeb dhirirkeedu le’eg tahay 3,333 kilomitir kuna fadhida aag dhaqaale u gaar ah (EEZ, exclusive economic zone) oo ka badan hal malyan kilomitir oo isku wareeg ah ayaa ka mid ah goobaha ugu qanisan kalluumaysiga adduunka oo aan weliba si weyn looga faa’iideysan.
Aaggan badda usii galaya ilaa 370 km dal shisheeye kalama bixi karo khayraad nooc kastya ha ahaado iyadoon ogayn Soomaaliya. Haseyeeshee, tan iyo burburkii nidaamkii kelitaliska waxaa fara ba’an ku hayay xaalufinta kalluumaysiga sharcidarrada ah oo had iyo jeer ka baxsada baaritaannada siina kordhay wixii ka dambeyay hoos u dhacay burcad-badeedda.
Blue Marine Foundation ayaa May 20, 2022 sheegtay in dalalka Midowga Yurub ay u fasaxeen maraakiibtooda inay si sharcidarro ah uga kalluumaystaan biyaha Soomaaliya. Hay’adda OceanMind ayaa soo bandhigtay dhaqdhaqaaq kalluumeysi oo ay wadeen maraakiib Isbayn (Spain) iyo Faransiiska leeyihiin.
Kalluumaysigan oo qawaaniinta adduunka oo idil khilaafsan wuxuu si daran u xaalufiyaa tabdin (Tuunada) nooca loo yaqaan “Bluefin ama albacore” (Tuna alalunga) oo aad loo jecelyahay.
Soomaaliya ayaa dhibaato ku hayaan maraakiibta kalluumeysiga Midowga Yurub oo ciidamada badda “Atlanta” hoos yimaadaan kuwaasoo ku cadaadinayo Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) inay siiso muddo kordhin dhan sagaal bilood, balse marnaba iska xil saarin inay wax ka qabataan xaalufinta sharcidarrada ah.
Maraakiibta Giriiga, Talyaaniga, Portugal, Isbyn, iyo Fransiiska ayaa taariikh kalluumaysi sharcidarro ah ku leh Galbeedka Afrika, taasoo caddaynaysa in Midowga Yurub uu hagoogayo xaalufinta biyaha Soomaaliya. Waxaa daliil ka ah in aqoonyahannada daraasadka samayay markay kala hadleen xaalufinta badda Soomaaliya ay ugu jawaabeen: haddeer kuma tala jirno inaanu yareeyno.
Sawirro dayax-gacmeedka qaaday ayaa muujinaya maraakiib Yurub oo sanduuqyo ku gurayo kalluun noocyada aan la nidaamin oo ay ka jilaabteen aagagga mamnuuca ah (marine reserve area), taasoo kor u qaadday walwalka laga qabo saamaynta xun ee ay ku yeelan karaan kaydka kalluunka iyo hab-nololeedyada badda – marine ecosystems.
Daraasadka waxay kaloo sheegtay in 2020 uu ahaa sannadkii ugu darnaa oo badda laga xalufiyay saddex dalool labo oo lagu qiyaasay inuu kalluunkaas ahaa “Tabadin” oo ay ka qaadanayso 10 (toban) sano si uu isusoo taro.
Maraakiibtaas waxay kalluumaysan karaan muddo dheer iyagoo ku rogaya tacabkooda maraakiibta qaboojiyeyaasha oo ku sugan cirifka biyaha caalamiga ah ee aaga dhaqaalaha u gaarka ah dalka (EEZ). Soomaaliya ma laha awood ay ku mamnuucdo amaseba kaga xannibto soo gelitaanka biyaheeda.
Marka laga reebo, ganacsiga maandooriyayaasha iyo hubka, kalluumaysiga sharcidarrada ah waa fal dambiyeedka saddexaad ee ugu ribix badan caalamka. Dowladda Soomaaliya wuxuu xil weyn ka saran yahay badbaadada khayraadka dalka.
Dalku waxuu leeyahay ilaa 604 nooc oo kalluun ah, kuwaasoo 420 ka mid ah ay yihiin kuwo ganacsi gal ah. Balse, maraakiibta kalluumeysiga ee dalalka Yurub iyo Aashiya ee loo soo jiheeya badda Soomaaliya waxaa u sabab ah “tuunada” oo aad u qiimo badan.
Warbixinta waxay kaloo muujisay in maraakiibtani, gaar ahaan kuwa dalka Isbayn (Spain) ay demiyaan qalabka loo yaqaan (AIS, automatic identification system) oo khasab ku ah maraakiibta waaweyn oo idil kaasoo sheegaya goobta uu markabku kaga sugan yahay si uusan markab kale ugu dhicin.
Sidaas daraaddeed, DFS waxaa waajib ku ah inay wadahadallo diblomaasiyadeed la yeelato Midowga Yurub si ay ugala xaajooto dhaqdhaqaaqyada maraakiibtooda si ay u joojiyaan ku xadgudbka madaxbanaanida qaranka Soomaaliyeed islamarkaasna loo hubiyo inaanay ku lug lahayn tahriibka hubka sharcidarrada ah. Baarlamaanka (BFS) waxaa isna waajib ku ah inuu dhammaystiro sharuucda badda si kuwa ku xadguba loo marsiiyo qaanuunka.
Previous articleGudoomiye Ku-xigeenka Arimaha Bulshada Degmada Jalalqsi ayaa yiri Waxaan kula talin Lahaa in xilka qaadis lagu Sameeyo TaliyashabAmniga & Maamulka waliba Deg deg ah Gobolka Hiiraan Dadkii Waa eey Dhamadeen Alow Sahal Amuuraha
Next articleWaa kuma ra’iisul wasaaraha uu Xasan soo xulan doono?
Wararkii ugu dambeeyay Weerar lagu dilay Saddex Askari
Mid ka mid ah Ilaalada Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Muqdisho lagu...
Wararkii ugu dambeeyay ee dadaallada ansixinta Ra’iisulwasaaraha magacaaban